Ny tsena tombontsoa sy ny fanantenana ny KOOWHEEL hoverboard K8 - Jomo Teknolojia Co., Ltd
1. Ny satan'ny fampandrosoana ny tena mahay mampifandanja scooter
2. Foana ny tsena ny mizana fiara.
3. K8 tsena tombontsoa sy fanantenana
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny lenta ny mpanjifa, ny vaovao angovo fiara - ny fifandanjana fiara no tian'ny an-toerana sy avy any ivelany mpanjifa noho ny fiarovana ny tontolo iainana, ara-toekarena ary mety endri-javatra, mpanjifa handray soa avy amin'ny lenta ny fitaterana tinady, ny any ampitan-dranomasina tsena dia be, afaka manantena ny fampandrosoana no andrasana. Avy amin'ny angovo vaovao maneran-fiara orinasa, ny voalanjalanja fiara, marani-tsaina fiara ho lasa ho avy ny mahazatra ny fampandrosoana. Shina no firenena lehibe indrindra Output sy ny fanondranana ny herinaratra tena mahay mampifandanja scooter eo amin'izao tontolo izao, nampamoahana an'i 90% ny Global fahaiza-mandanjalanja scooter orinasa. Na izany aza, noho ny tsy fisian'ny mifanaraka fitsipika sy ny fenitra an-trano, herinaratra scooter mpanamboatravokatra famolavolana sy ny orinasa mpamokatra entana, dingana tsy misy fitsipika tari-dalana, ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso, izay niafara tamin'ny kalitaon'ny vokatra tsy azo antoka, ny tsena toy ny sampahom, ny copycat, ny tsena no tondraky sandoka sy shoddy vokatra, mpanjifa dia tsy afaka mamantatra ny hatsaran'ny ny vokatra. Ny ara-dalàna sy ny tombontsoan'ny zo tsy azo antoka, ny fiarovana Product loza manana feno nipoaka tamin'ny taon-dasa, mitondra fatiantoka lehibe ho mpanjifa, ary ho zava-dehibe azon-tsampona ny herinaratra scooter mandanjalanja ny fanondranana.
Survival ny sahaza indrindra, tsara toetra foana ny Fitomboan'ny ny mandanjalanja fiara
Ny orinasa izay mamokatra orinasa mila vokatra tsara, ary mila orinasa mpampiasa izay afaka manome fiarovana. Fa ny mizana fiara orinasa mbola miatrika zava-tsarotra, orinasa mila miresaka orinasa olana, tena fandinihana sy mitady fiovana sy fandrosoana, ny vokatra tsara toy ny voalohany, manitsy ny orinasa fitsipika, ary miaraka mamorona tsara tontolo iainana ho an'ny tsena fifaninanana ao amin'ny orinasa eo ambany fiarovana fitsipika hentitra. Rehefa heverina mafana indrindra mirefy 6.5 mahazatra tena mahay mampifandanja scooter nivarotra tamin'ny ny mizana fiara tsena. Etsy an-daniny, ny orinasa ambaratonga mampivelatra haingana, fa amin'ny lafiny iray dia very hevitra fifaninanana. "Mazava ho azy dia olona ao anatin'ny ny fianarana dia maneho ny mpanao gazety. Noho ny tsy fisian'ny fitsipika, ny sasany herinaratra mandanjalanja scooter mpanamboatra mampiasa ambany votoatiny, roa fifaliana sy ny fomba hafa mba hampihenana ny vola lany, dia tsy manitatra isika raha milaza, izany masiaka fifaninanana dia mety hahatonga ny rehetra orinasa haingana hiverina any aotra, ity iray ity zato miliara yuan , ny tsena haben'ny amin'ny mizana orinasa fiara koa mety hiatrika bebe kokoa.
Ahoana no hanafoana hanimba zavatra momba ireo orinasa sy Hahay handanjalanja tsara hatrany fiara orinasa ny fahasalamana, ny KOOWHEEL teknolojia avy any vao natsangana mba ankehitriny dia manaraka ny toetra sy ny fiarovana aloha, mba hanatratrarana aotra loza, mba hanome fiarovana ny fiarovana ny mpanjifa. Ahoana ny fifaninanana miaraka amin'ny 6.5 mirefy ambany hoverboar eny an-tsena, ny tafavoaka velona ny sahaza indrindra sivy friction isika, tsy manantena ny mahazatra 6.5 mirefy modely, fa ny safidy ny Optimization sy ny zava-baovao, mba hanome mpanjifa vaovao endrika 6.5 mirefy K8 herinaratra mandanjalanja scooter hitsena ny tsena fitakiana dia manana vola avo mba hanoloana ny mahazatra mirefy 6.5 mifanitsy tsy nisy teo amin'ny tantara.
K8 tsena tombontsoa sy fanantenana
1. miankina modely vokatra.
Novolavolain'ny Italia Milan, mangatsiatsiaka sy tarehy tsy manam-paharoa, manokana fitsipika rafitra, dia nankasitraka ny Eoropeana sy Amerikana mpanjifa. Velomy ny endriky ny taloha ka hivadika ny sakana ny patanty fandikan-dalàna
2. PCB Taotao rafitra roa sosona
Nolaniana rafitra motherboard lafiny roa avy Taotao siansa sy ny teknolojia orinasa. Raha ampitahaina amin'ny an-tsena mora vidy marika-name rafitra tokana motherboard, Taotao manana fahamarinan-toerana ny lafiny roa tsara rafitra, dia mitarika ho amin'ny fiarovana ny tena manokana fiarovana ny mpampiasa.
Taotao Tech: 1, PC, lehibe, birao, miaraka, 2pcs, gyroscopes.
Kilasy voalohany ny kalitaon'ny maotera ao Hong Hong Motors dia manana ny tombony ny tsara antoka, malamalama mitaingina ary tsy misy tabataba.
Power bateria karazana entana, fiainana intsony. Koowheel K8 mampiasa hery 14 fahavaratra bateria fototra 24V an-trano miaraka amin'ny hery bateria Packs, afo intsony ny fiainana sy ny fiarovana, efa notsapaina, hihazakazaka lavitra noho ny tsena mitovy 36V mandanjalanja scooter, fahefana lehibe!
Ny fonosana bateria na ny fanaka fireproof ara-nofo, ary dia azo antoka kokoa noho ny malemy fonosana ampiasain'ny mpiara-miasa
5. Hand tady
Miaraka amin'ny karazana portable hook tady, dia azo namaha ny entana, tsara tarehy sy mety, ary azo tompony, oharina amin'ny mahazatra mirefy 6.5 voalanjalanja fiara. Dia mora kokoa ny mitondra tsy misy poketra
6. Price tombony
Post fotoana: Aug-15-2017